Zviuru zvemabhodhoro ejekiseni akamirira kucheneswa pazuva, maitiro ekuzvigadzirisa.
+ Kutanga makorokoto Qingdao Chitubu Chemishonga yeMuchina Fair Yakabudirira kupera! Hangzhou Xipingzhe Instruments Technology Co., Ltd inokudzwa kwazvo kusangana nevatengi vakawanda. Mune iyo Mishonga yeMuchina Exhibition, isu takadzidza zvakawanda nezve izvo zvinodiwa nevatengi vazhinji, uye mutengi ...
Maitiro ekuchenesa marabhoritari glassware nekukurumidza uye nyore?
Kuchenesa glassware kwagara kuri basa rezuva nezuva murabhoritari. Kune mamwe masarasara mushure mekuyedzwa, matanho ekuchenesa, nzira dzekuchenesa, uye huwandu hweruzhinji hwakasiyanawo, izvo zvinoita kuti vazhinji vanoedza mutsva vanzwe kutemwa nemusoro. Saka tingachenese sei mabhodhoro egirazi nekukurumidza sezvinoita possib ...
Mubvunzo wekutanga: Inguva yakadii yaidikanwa kusuka mabhodhoro mune rimwe zuva rekutsvaga kwesainzi? Shamwari 1: Ndakaita iyo yepamusoro-tembiricha organic mvura chikamu synthesis kweinenge gore nehafu, uye zvinotora ingangoita 1 awa kugeza mabhodhoro zuva rega rega, ayo anoita 5-10% yesainzi ...
Anti-kuyambuka-kusvibiswa, kuvimbika kweDNA kuyedzwa kunogona kuburitsa chokwadi mumakona akavanzika
Mumafirimu mazhinji nemabasa ekunyora, forensic mumarabhoritari anoonekwa seakasarudzika uye akakosha hupenyu, kunyanya iyo yekuzivikanwa kweDNA yekuyedza chirongwa chinowanzove kiyi yekuwana ruzivo uye kugadzirisa nyaya. Nekudaro, kana iko kurongeka kwemabvunzo bvunzo wakapihwa kukahadzika, zvinongoitika kwete ...
Pharmaceutical indasitiri-ndechipi chinongedzo chakakosha kudarika kusauraya utachiona uye kutapudza
Munguva pfupi yapfuura, kambani yemishonga yakaferefetwa ikagadziriswa nezviremera zvine hungwaru nekuda kwengozi dzinogona kuchengetedzwa muhurongwa hwehutongi hwemhando yepamusoro ndokumanikidza kambani yemishonga kuti imise zvigadzirwa kugadziriswa nekukasira, uye nekambani "drug GMP̶ ...
Iko otomatiki murabhoritari yemagetsi girazi washer iri nyore kushandisa?
Iyo otomatiki giraziware washer haisi kushamisika kune vazhinji vanoedza Nyanzvi kunyangwe paine akawanda akasiyana maindasitiri hunhu pakati pemarabhoritari, senge madhipatimendi ehurumende ane marabhoritari ehutano, ekupinda-kubuda kuongorora uye kupatsanura marabhoritari ehurongwa, chikafu nemishonga ...
Mvura, reagents, magirazi emvura, kana paine imwe isina kukodzera kuongorora chikafu, ipapo huchokwadi hwezvabuda bvunzo yezvikafu zvichabvunzwa.
Nyaya dzekuchengetedza chikafu zvine chekuita nehutano hwemunhu wese, saka yanga iri yekutarisisa yeruzhinji nguva dzose. Kunyanya mumakore achangopfuura, nemamiriro akapfuma ezvinhu zvevanhu uye nekuenderera kunatsiridzwa kwemararamiro ehupenyu, kudiwa kwekuyedzwa kwechikafu kwakaramba kuchiwedzera. In ...
Tanga nekuchenesa girazi zvakanyatsonaka! General murabhoritari akangwara shanduko ita seizvi .-- otomatiki giraziware washer
Nekukurumidza kukura kwesainzi uye tekinoroji, iyo yakangwara maitiro iri kukanganisa ese mativi edu. Nomuzvarirwo, marabhoritari ane akawanda masayendisiti zvinhu zvinosiyana Nekudaro, kunyangwe hazvo akawanda maindasitiri masangano aine ma laboratories, asi iwo mwero wehungwaru digitization ndeye actu ...
Kisimusi yakanaka uye gore rinofadza!
Kisimusi yakanaka uye gore rinofadza! Hangzhou Xipingzhe Instruments Technology Co, Ltd Inokuda iwe nemhuri yako Hutano, Runyararo, Rudo Rufaro uye mufaro munguva yeKisimusi uye gore rinouya! XPZ inotungamira gadzira re laboratory glassware washer, iri muguta reHangzhou, Zhe ...
Chiyero hachina kubudirira, yakasvibiswa giraziware ndiyo kiyi
Vanhu vazhinji havazive kuti maabharabhoritari ehupenyu akasiyana nemarabhoritari akajairwa. Mhando idzi dzinosanganisira microbiological biological laboratories, zoology marabhoritari, uye mabhotani ma laboratori, ayo anonyanya kushandiswa senzvimbo dzekuyedza kuyedza kwehupenyu. Kunyanya mumaindasitiri kana ini ...